Dr. Oz Show သည် Porn-EDC - သင်၏ Brain On Porn ကိုအမှာစကားပြောကြားသည်
အဆိုပါဒေါက်တာ Oz ကိုပြသပါ Porn-သွေးဆောင် ED အမှာစကားပြောကြား
အပိုင်း ၁ ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် Erectile Dysfunction ဖြစ်ပေါ်နိုင်သလား။
အပိုကဗီဒီယိုအစိတ်အပိုင်း: ဒေါက်တာအင်ဒရူး Kramer အစုရှယ်ယာ ED အပေါ်တချို့ကသိကောင်းစရာများ
ဒါ့အပြင်တွေ့မြင်: PIED အပါအဝင် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အသိအမှတ်မပြုတဲ့သူကျွမ်းကျင်သူများ,
ပညာရှင် ၃ ဦး စလုံးသည် porn-induced ED နှင့်၎င်းတို့၏လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းရှင်းပါသည်။ အပိုင်း ၄ ကိုပိတ်ပစ်ရန် porn အတွက်ကြော်ငြာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့သော sexologist Ian Kerner ၏မှတ်ချက်များ မှလွဲ၍ ပြပွဲသည်မျှော်လင့်ထားသလောက်ကောင်းသည်။ အဆုံး၌အင်တာနက် porn ၏သီလနှင့် ပတ်သက်၍ တုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းသည်မည်မျှမှားသနည်း။ ယခုအခါအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမည်သို့ပြသမည်ကိုပြသပါ ဖြစ်စေတဲ့ ED နှင့်လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှု။ သူကလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ 50% အမွှေးအကြိုင်ကင်းမဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသည့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အကွောငျးမဟုတ်ဘဲရောဂါပျောက်ကင်းထက်ကပြပွဲပေါ်တွင်စုံတွဲတို့အတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့?
စွဲလမ်းမဖျောပွထား - အဆိုပါပြပွဲစွဲနှင့်၎င်း၏ပိုပြီးခေါင်းမာ၏ဖြစ်နိုင်ခြေလျစ်လျူရှု, ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲမဟုတ်တော့-ရေရှည်တည်တံ့။ အမှန်စင်စစ်တာဝန်မဲ့သည့် panel ကိုအပေါ် sexologist, သူ၏အကြံပေးချက်ကို back up လုပ်ထားဖို့ဘာမှမပါဘဲ, လူပြန်လည်ကောင်းမွန်ထားပြီးတခါ porn အသုံးပြုမှုကိုပြန်သွားဖို့စုံတွဲများအားပေးထားသည်။ မယုံနိုင်စရာ။ ယောက်ျားတွေကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆေးပညာအခွအေနေကနေအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနှင့်ညစ်ညမ်း-မေတ္တာရှင် sexologist ယင်း၏အသုံးပြုမှုကိုပြန်သွားဖို့သူတို့ကိုပြောထားသည်? စွဲလမ်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဆရာဝန်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကပိုင်မှတ်ချက်ချအဖြစ်,
"Flatline" သတိပေးချက်မရှိပါ - အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပြပွဲတွင်လူငယ်များအနေဖြင့်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်ဖွင့်ရန်အတွက်တစ်လထက်မပိုသောညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများလိုအပ်သည်ဟူသောအချက်ကိုမပြသပါ။ ဤလူငယ်ကောင်လေးဥပမာ, သူလိုအပ်ပုံကိုဆြေးြေိံး ကိုးလ အပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်ရန်။ ပိုဆိုးတာကတော့လူငယ်တွေအများကြီးဟာ“flatlineED ကနေပြန်လည်နာလန်ထူလာချိန်မှာ libido မရှိ၊ ဒါဟာရက်သတ္တပတ်များသို့မဟုတ်လပေါင်းများစွာကြာရှည်နိုင်ပြီးများစွာသောသူတို့သည်တစ်လအကြာတွင်ဤအဆင့်၌ရှိလိမ့်မည်။ သူတို့အပိုင်းကိုကြည့်ပြီး ဦး နှောက်ရဲ့ပုံမှန်အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှုကိုပြန်ရဖို့အချိန်ပိုလိုတဲ့အခါသူတို့ဟာ“ ကျိုးပဲ့” တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းမရှိပါ ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက် Hyper-reactive ဆွနှင့် Hyper-ပလပ်စတစ်မှဖြစ်ကြသည်။ အကြောင်း, သူတို့ဖြစ်ပါတယ် အသစ်သောလှုံ့ဆော်မှုမှအလွယ်တကူဝါယာကြိုး။ မျှော်လင့်တဲ့အနာဂတ်ဒေါက်တာ Oz အစိတ်အပိုင်းအတွက်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် အသက်အရွယ်နုပျိုသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူဆင်းရဲဒုက္ခ နှင့်သူတို့၏ရောဂါလက္ခဏာများ။ သူတို့၏ထူးခြားသောပြproblemsနာများစွာသည်၎င်းတို့သည်စူပါလှုံ့ဆော်မှုမြန်သောအမြန်နှုန်းပေါ်မှစတင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အရေးကြီးသောကာလနှင့်ကြိုတင်အစစ်အမှန်လိင်ကြိုးစားနေဖို့နှစ်ပေါင်းကြောင့်သုံးပါ။ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်လျော့နည်းပလပ်စတစ်ကြီးထွားအဖြစ်အစောပိုင်းလူကြီးများတွင်အချို့ကြောင့်ခက်ခဲတဲ့အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်တုံ့ပြန်ရန်ရှာဖွေပါ။ မြင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn တွေ့ဆုံ
လျစ်လျူရှုသည်အခြားရောဂါလက္ခဏာများ - ဦး နှောက်ကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အခါစိတ်ဖိစီးမှု၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်, အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုမရှိခြင်း, အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများ, လှုံ့ဆျောမှုမရှိခြင်း, မျှော်လင့်မထားတဲ့ညစ်ညမ်းအရသာမှတင်းမာမှုလျှော့ချ, ဒါကြောင့်ထွက်။ ထိခိုက်နစ်နာသူတွေကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသိရန်အဘို့အဒါဟာအရေးကြီးပါတယ် နိုင် မတူကွဲပြားသောရောဂါလက္ခဏာအတွက်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။